Cod Sira oo laga duubay Taliyahii hore ee Nabadsugidda Tuuryare oo dil ugu hanjabay Milkiilaha Shabelle +Cod | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Cod Sira oo laga duubay Taliyahii hore ee Nabadsugidda Tuuryare oo dil ugu hanjabay Milkiilaha Shabelle +Cod
Taliyihii hore ee Hay’adda Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka (NISA), C/raxmaan Maxamed Tuuryare, ayaa Xalay ku hanjabay in tallaabo uu ka qaadi doono Idaacadda Shabeelle ee Magaalada Muqdisho.
Tani waxay ka dambeysay markii Idaacadda Shabelle ay baahisay warbixin ku aadan in Taliyihii hore ee Nabad Suggida uu degan yahay dhisme ku dhow Garoonka Aadan Cadde, oo 26-kii bishii October xoog looga saaray Idaacadda Shabelle.
C/maalik Yuusuf Maxamuud, Milkiilaha Idaacadda Shabelle, ayaa sheegay in dhismahaasi ay leedahay Wasaaradda Gaadiidka, isla-markaana ay ka kireysteen Wasaaradaasi, iyagoo markaasi shubay lacag dhan afartan iyo lix kun oo dollarka Mareykanka ($46,000).
C/raxmaan Maxamed Tuuryare, ayaa ka carooday warbixinta laga sii daayay Radio Shabelle, iyadoona uu Milkiilaha Shabelle ku amray in tallaabo uu ka qaado Wariyihii akhrinaayay warbixintaasi, haddii kalana uu isagu caawa tallaabo ka qaadi doono Idaacadda Shabelle.
C/maalik iyo C/raxmaan Tuuryare oo khadka teleefanka ku wada hadlaya, ayaa waxaa laga maqlayaa C/maalik oo leh “Anaga guriga sharciyaa ku deganayn, dowladaana na dejisay, sharci ayaana u haysanaa.”
C/raxmaan Tuuryare oo hadda ah La taliyaha Wasiirka Amniga Somaliya, C/risaaq Cumar Maxamed, ayaa ka meermeeray in uu degan yahay guri ay sharci u haysato Shabelle, balse uu degan yahay guri dowladeed.